Ndozi Obodo – hoo!haa!!
NDỊ NTOROBỊA INWE ÁKÁ ỌRỤ NA-ENYE AKA NA MMEPE
– Dokinta Laz Ude Eze Ìgbò bụ Ìgbò ekele m unu. E were la m ozi ọzọ bata n’ọgbọ. Ndụ mmiri, ndụ azụ. Ọ ji ngaji eri, cheta kwa ndị ji áká Kedụ onye bụ onye ntorobịa? Ọ bụ karị ndị gbara afọ ịrị na asatọ ruo afọ ịrị atọRead More →
-Dọkịnta Laz Ude Eze Mmepe obodo dị na ụdị na ụdị. Biko ka m jụọ ajụjụ a. Olee ihe e jiri ama obodo mepere emepe? Ụfọdụ ga-asị na ọ bụ ezigbo okporo ụzọ, ọkụ latrik, nnukwu ụlọ, ógwè ọgbanélú (flyover) , ọtụtụ ụgbọala, na ihe ndị ọzọ dị iche iche.Read More →